RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan xulka Germany oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
October 8, 2019 at 17:18 RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan xulka Germany oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta2019-10-08T17:18:06+01:00 CAYAARAHA
(Germany) 08 Okt 2019. Mid ka mid ah xiddigihii kula guuleystay xulka qaranka Germany koobkii adduunka 2014 oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in gabi ahaanba uu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta.
Xiddiga reer Germany ee Bastian Schweinsteiger ayaa ku dhawaaqay in gabi ahaanba uu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta, isagoo jira da’ada 35 sano kadib mustaqbal dheer ee ka buuxa guulo iyo koobab.
Schweinsteiger ayaa wuxuu mustaqbalkiisa ciyaareed ka bilaabay kooxda Bayern Munich, isagoo ku qaatay intii u dhaxeysay 2002 ilaa 2015, wuxuu u dhaqaaqay kooxda Manchester United, isagoo ugu dambeyntii ku soo gaba gabeeyay waayihiisa ciyaareed ee kubadda cagta naadiga Chicago Fire ee horyaalka dalka Mereykanka.
Heerka kooxaha, Bastian Schweinsteiger ayaa wuxuu kula guuleystay 8 jeer horyaalka Bundesliga Bayern Munich, 7 koob ee ah DFB-Pokal, Germany Super League oo 1 jeer ah iyo hal mar oo ah tartanka Champions League.
Waayihiisii kooxda Manchester United ma uusan ku raaxeysanin, wuxuuna la qaaday kaliya koobka FA Cup hal jeer, kahor inta uusan ku biirin horyaalka dalka Mareykanka, kaddib dhibaatooyin xoogan uu kala kulmay tababare Jose Mourinho.
Heerka caalami wuxuu Schweinsteiger kula guuleystay xulkiisa qaranka Germany Koobkii Adduunka 2014, iyo koobka qaramada Yurub ee Euro 2008, iyagoo kaalinta 3-aad kaga dhameystay Koobkii Adduunka 2006, wuxuuna u saftay 121 kulan.
« Book: Trump raged against refugees from Somalia in private meeting
Germany announces $73m aid package to Somalia »